I-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner - Ukuhlanza Umngane Wendlu
Ikhaya / Imikhiqizo / I-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner
Amaphilisi okuhlanza ekhaya wonke ahlose ukuhlobisa.
Lo mkhiqizo i-ejenti yokuhlanza edidiyelwe yokusebenza, ehlangene ngqo namanzi e-sprinkling can, elula kakhulu ukuyisebenzisa, ingasusa kalula izembatho zokugqoka, i-kitchen range hood stains, izindlu zangasese ze-ceramic tile, imoto yangaphakathi, ngisho ne-polish polish, njll, ushiya ikhaya lakho likhanya ngokukhazimulayo. Umhlanzi wokuhlanza i-effervescent multifunctional unomsebenzi wokulwa nokuguga, ukugcina ukuguquguquka nokukhulisa impilo yayo yokusebenza. Ukuthengisa okuqondile yi-factory, ukuqinisekisa izimpahla eziqinisekisiwe nentengo eshibhile.
♣ Kufanelekile ukuhlanza nsuku zonke endlini.
♣ Ngokuhlanza okukodwa, akukho bleach yamakhemikhali.
♣ Hlanza ngokujulile futhi ugcine isikhathi eside.
♣ Umphumela omuhle wokuvimbela amabhaktheriya ekuzaleni.
I-tablet ye-1PC ingalingana namanzi we-500ML.
Inzuzo ye-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner
I-Effervescent Spray Cleaners ichitha ngokushesha ukuxhumana namanzi, ukuqhuma okuphansi futhi kulula ukuwageza.
Sebenzisa le ukuhlanza okuningi kungenza i-500ml amanzi ahlanzekile ahlanzekile ahlangene. Unomthamo okwanele
ukuhlanzwa kwekhaya okujwayelekile futhi kungasetshenziswa kumafasitela, phansi, izindlu zokugeza, njll.
Isihlungi se-spray for electronics sinomphumela omuhle. Ivela ema-enzymes ephilayo ukuze ahlakaze izitini
ukufezekisa umphumela ohlanzekile, obunemvelo obuningi, futhi ongesiwo onobuthi. Konke kungashintsha ukuhlanza kwakho okuvamile.
Ayikho i-bleach yamakhemikhali ngisho ingavikeleka ukuyisebenzisa ekuhlanzeni izitembu zesilwane ngaphandle kokulimaza.
Sithengisa kuphela amaphilisi okuhlanza ama-effervescent, hhayi ukuthengisa ukufafaza!
Yini okufanele ufunde emaphilisi okuhlanza?
♦ Ukuhlanza i-super auto glass glass, egqamile kwamanzi angaphakathi kwamagesi. Ukuhlanza amandla anamandla.
♦ The ilula elula yonke into ehlanzekile ngosayizi omncane, okulula okusetshenziselwayo futhi okuphathekayo.
♦ Ubukhulu bomkhiqizo: Ububanzi bepilisi ngu-2cm / 0.8 ", ubukhulu bepilisi ngu-0.5cm / 0.2".
Gxilisa uhlobo lwezinto ezibonakalayo futhi ungenza ngokwezifiso umbala wethebulethi weklayenti.
♦ Ukusebenza kahle kokuhlanza indlu. Ithebhulethi yethebhulethi elingana ne-500ml yokuhlanza okuhle kakhulu.
♦ Ukuthengiswa kwempahla ngokuqondile, izinga eliphakeme ngentengo ephansi! Ukubhuka okungaphezulu okuningi kunesaphulelo esingcono.
♦ Kungukuthi Ikhishi elihle kakhulu ekhishi elingu-grease, Ngezinhlelo zokusebenza ezahlukene ekhaya, ehhovisi, ngaphakathi emotweni.
Isexwayiso: Lo mkhiqizo kufanele ugcinwe endaweni epholile futhi eyomile, Gcina ukufinyelela kwezingane. Ungalokothi ugxume!
Lo mkhiqizo awukwazi ukusetshenziselwa amanzi angilazi engilazi! Umsebenzi wokuhlanza kuphela ongenalo umsebenzi wokufakelwa i-antifreeze!
Indlela yokwenza i-agent yokuhlanza enamandla?
♦ Vula isembozo se-sprayer, ufake inhlamvu ye-block effervescent cleaner.
♦ Gcwalisa amanzi ahlanzekile, i-1pc tablet = amanzi we-500ml.
Ukulinda imizuzu embalwa, uzokwenza kahle i-ejenti ehlanzekile yokuhlanza i-agent!
Ulwazi olubanzi mayelana nemikhiqizo yokuhlanza eco-friendly, sicela Xhumana nathi!
I-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner Specifications Sheet
Umkhiqizo we-Spec. Ububanzi be-2.0cm x 0.5cm